Dhakhaatiirta Caafimaadka iyo Ururka Dhakhaatiirta ilkaha ee KMPDU oo shaqa joojin ku hanjabay. – iftiin fm
Dhakhaatiirta Caafimaadka iyo Ururka Dhakhaatiirta ilkaha ee KMPDU oo shaqa joojin ku hanjabay.
June 30, 2020 June 30, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Dhakhaatiirta Caafimaadka iyo Ururka Dhakhaatiirta ilkaha ee KMPDU ayaa sheegay in Maxkamada la tiigsan doonan Dowladda kountiga Siaya Maadama ay ku guul dareysatay inay ixtiraamto heshiiskii gorgortanka Wadajirka ee CBA-da.
Guddomiyaha Ururka KMPDU laanta Siaya Dr. Kevin Osuri,aya sheegay in dowladda kountigasi aynan dalacsiinin daqaatirta Misaaniyada sanadeedkii 2019/2020-ka Maadama heshiska uu ku jiray in daqatirta la dalacsiiyo.
Dr. Osuri oo saxaafada kula hadlay guddaha kountiga Siaya aya sheegay in kountiga ay diiday in ay Miiska wada hadalka timaado taasi oo daqaatirta ku qasabtay in ay kiiska geeyan maxkamada shaqaalaha ee dalka.
Dr. Osuri ayaa sheegay in Dowladda kountiga ay ku wargaliyeen go’ankooda balse aynan wax jawab ah ka helin.
Guddomiyaha Ururka KMPDU laanta Siaya Dr. Kevin Osuri,ayaa sido sheegay in daqaatirta ay baaran dagayaan in ay shaqa joojin ku dhaqaaqan maalma soo soocda.
← Xiddigaha la kala iibsaday suuqa xaggagan.
Brighton Vs Man United →